onlineakhabar.com: बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको लागि निकै खुसीको खबर !!!! (हेर्नुहोस् भिडियो)
Main News, Money, National, Nepali News, Technology, Technology News, Video » बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको लागि निकै खुसीको खबर !!!! (हेर्नुहोस् भिडियो)
बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको लागि निकै खुसीको खबर !!!! (हेर्नुहोस् भिडियो)
बिदेशमा भएका नेपालीहरुको लागि खुसीको खबर बनेको छ जुम सर्भिस । जुम अ पेपाल सर्भिसले अब नेपालमा पनि सजिलै सँग पैसा पठाउन सकिने जनाएको छ । आफ्नो मोबाइलमा जुम सर्भिसको प्रयोग गरि केहि सेकेण्डमा नै नेपालमा पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ ।
यो सेवा प्रयोग गर्दा १ हजार डलर सम्म पठाउँदा ४.९९ डलर शुल्क लाग्ने छ भने त्यो भन्दा बढी रकम पठाउँदा निशुल्क हुने समेत बताएको छ । यस भन्दा अगाडी बिदेशबाट पैसा पठाउन अन्य माध्यमहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने ति माध्यमहरु भन्दा यो निकै सजिलो र सहज भएको देखिन्छ ।
Tags : Main News Money National Nepali News Technology Technology News Video